Ciise Masiix, oo rajadeenna ah oo kaliya, dayrta ee nin iyo qorshaha Ilaah ee badbaadada | Apg29
Horeba 1 Bilowgii 3, waxaan arkaynaa sida qorshaha Ilaah ee uu bilaabo inuu qaab qaadan.
aan la qiyaasi karo ayaa ka dhacay; gaar wanka qurbaanka Ilaah Ciise Masiix u yimid hore. Wuxuu Qorniinka tan iyo allabari Shanta ayaa hore u tilmaamay.
Tani waa qayb ka mid 1 of taxane ah oo 3 qaybood in kor loo qaado ee Fall ah, qorshaha Ilaah ee badbaadada, xaq, iyo Part 3 quduusnaanta ogaysiis ah kuwa raacsan Ciise ku samayn doonaa. In this post, Qaybta 1aad, Waxaan kor ugu qaadi doonaa Fall iyo qorshaha Ilaah ee badbaadada ah Badbaadiyaha lasii ballanqaaday, iyo muhiimadda ay allabariga ee Axdiga Hore, lala Ciise dhimashadiisa qurbaanka.
been khiyaano abeeso
1 Bilowgii 3 sharaxayaa sida abeesada (Ibliiska) waxay maamushaa si aad u hesho Aadan iyo Xaawo in aan Ilaah ugu dembaabaa. Ilaah markii hore ku yidhi Adam in 1 Bilowgii 2:17 "laakiin geedka aqoonta wanaagga iyo xumaanta waa inaanad waxba ka cunin, waayo, maalintii aad wax ka cuntid hubaal waad dhiman doontaa." Waxaan ka akhriso sida Eve dhegaystay been been abeesada "ma dhiman doontaan." Waxay siiyey in si jirrabaadda inay cunaan midhaha geedka reebay, iyo xataa Adam siiyey in si jirrabaadda. Oo waa inuu dembigiisa, caasinimo ka gees ah Ilaah, sidaas ayay ku dhinteen, waxay xagga ruuxa dhintay, oo haatan waxaa ay istaageen iyagoo qaawan, layna qaawiyo.
Waxaan qabaa wanaan inta badan diiradda lagu saaray la'aanta ah ee ammaanta Ilaah. Romans 3:23 "All ku dembaabnay oo gaaban yimid xagga ammaanta Ilaah." In Muujintii 3:18, waxaan sidoo kale ka akhrisan wanaan, iyo haddii call si ay u iibsadaan dhar cad si ay isu daboolo. 1 Gen 3 sidoo kale sheegayaa sida Aadan iyo Xaawo, kadib markii Fall ayaa maqlay Ilaah socodka beerta, iyo sida ay isaga ka qarsoon.
Marka Ilaah wuxuu yidhi Adam, "Xaggee baad joogtaa?" Markaasuu u jawaabi doonaa, "Waxaan maqlay codkaaga beerta, waanan cabsaday, maxaa yeelay, waan qaawanaa. Oo waan isqariyey. "Marka aad ka akhrisan qoraalkan, waxaan arki ugu daran ee ka dhalan kara dembi. Wadaagis u dhexeeya Ilaaha Quduuska ah iyo nin ka jabay. Waa maxay xanuunka weyn bulshada this jebiyey waa ka dhigay xataa Ilaah!
Waxa uu lahaa ma lahaa in la abuuro nin lahaa haddii uusan doonayay in, laakiin hadda wuxuu ku samayn. Waxa uu doonayay inuu xiriir dhow la leh nin, oo ku salaysan iyada leedahay doorasho xor ah. Xiriirka Tani dhow qeexayaa David Sabuurka 25:14, "The hobnob Eebe agtiisa kuwa isaga ka cabsada, oo axdigii uu ka yeela aqoonin." Markaa waxaan arkaynaa sida dembiga sababay dhimashada in dunida u yimid.
In Rome 5:12 waxaan ka akhrisan, "Sidaa darteed, sida dembigu nin keliya dunida iyo dhimasho galay dembiga, oo sidaasaa dhimashadiina u gaadhay dadka oo dhan u yimid, maxaa yeelay, waa la wada dembaabay."
qorshaha Ilaah ee uu bilaabo inuu qaab qaado
Horeba 1 Bilowgii 3, waxaan arkaynaa sida qorshaha Ilaah ee uu bilaabo inuu qaab qaadan. Waxaan ka akhriso oo ku saabsan sida uu Ilaah u siiyo yabooh ah oo Badbaadiyeheenna ah soo socda, farcankaaga naagta in ay tilmaamaysaa Ciise Masiix. "Oo madaxaaguu burburin doonaa," Ilaah wuxuu abeesadii. In Muujintii 20 waxaan ka akhrisan of Masiix guusha kama dambaysta ah in ka badan maska ​​duqa ah, kaasoo ah Ibliiska sida. Dembigu wuxuu ahaa markaas wixii Ilaah iyo dadka kala maqan.
Waxaan u aragnaa in Shanta ah, gaar ahaan 3 Genesis sida Eebe u doorto in uu ka mid ah dhibanayaasha, iyo kuwo kale qurbaanka dembiga iyo qurbaanka xadgudubka mararka reer binu Israa'iil si ay u gudo dembigooda. Dadkaas waxaa ku fiiqaya Weeraryahanka in Ciise Masiix iyo dhimashada qurbaan bixinta our aawadiis. Marka John tan iyo John 1 ayaa sheegay in markuu arko Ciise "Wanka Ilaah," marka uu ka hadlayo in dadkii ku jiray oo aqoon u leh fikradda ah in wanka qurbaanka dembiga iyo.
aan la qiyaasi karo ayaa ka dhacay; gaar wanka qurbaanka Ilaah Ciise Masiix u yimid hore. Wuxuu Qorniinka tan iyo allabari Shanta ayaa hore u tilmaamay. Nebi Ishacyaah wuxuu sii sheegay in Badbaadiyeheenna ah Cutubka 53, "Wuxuu loo dhaawacay xadgudubyadeenna, waxaana loo nabareeyey xumaatooyinkeenna. Ciqaabta isaga dul joogtay, waayo, nabaddeenna, oo dildillaaciistiina waynu ku bogsannay. Waxaan haystay oo dhan u hallaabay sidii lax, mid kasta oo waxay tageen xagga jidka isaga u gaar ah, laakiin dhan of our deynta, Rabbigu wuxuu isaga. Wuxuu loo garaacay, laakiin isagu is-hoosaysiiyey oo afkiisa ma uu furay. Isaga sidii wan la qalayo baa loo kexeeyey, oo sidii lax ku aamusan ka hor inta xiira, isagu afkiisa ma uu furin. "
Labada 3 Mos 16 iyo Hebrews 9 aan Akhrino Maalin weyn oo kafaaraggudka, maalinta wadaadkii sare oo sanadkiiba hal mar soo galay, Quduuskii Quduusyada oo dhiigga kafaaraggud iyaga u gaar ah iyo dembiyada dadka. In Cibraaniyada 9 aan Akhrino, sida Masiix oo mar keliya galay, Quduuskii Quduusyada jannada ku jira oo uu dhiiggiisa ku leh, oo ku guuleystay furashada weligeed ah. Waxaan furtay dembiga our xagga Ciise Masiix ka soo noqday qurbaanka dembiga our! Waxaa sheegayaa sida Masiix ah isugu bixiyey Ilaah oo aan iin lahayn in. Aayadda 22 ayaa sheegay in "sharciga nadiifiyey dhow wax walba ula galo dhiig, oo dhiigdaadinla'aan dembidhaaf ma jiro."
Iyada oo uu dhintay nicmoolayda, Ciise wuxuu galay jannada qudheeda in wejigii Ilaah hortiisa inooga muuqdo. Cibraaniyada 10:19, 20 "Walaalayaalow, xoogga dhiigga Ciise, hadda waxaan si kalsooni leh u tegi kartaa, Quduuskii Quduusyada, jidka cusub oo nool oo uu furay noo banneeyey daaha, in uu yahay, in la yidhaahdo, jidhkiisana." Markaasaa daahii macbudka ah , waxa uu ahaa ilxidhka qaro weyn in soocay quduuska ah ka ugu wada quduusan. Ilaa iyo inta ilxidhka weli halkaasuu joogay, sidaas darteed waa calaamad in sida deg deg ah u geliyey, Quduuskii Quduusyada, galay, Ilaah qudhiisu ma ahaa mid u furan oo lacag la'aan ah oo dhan.
Waxaan ka ogahay xagga 1 Corinthians 15:24, 25, in maalinta iman doona Masiixa gebi ahaanba burburin doonaa iyo joojiyo dhammaan ciidamada sharka leh iyo awoodaha iyo sayidnimo. Cadaawayaashaydii oo dhan waa la bakhtiin doonaa cagihiisa hoostooda (xusuuso yabooha in 1 Bilowgii 3 ku saabsan sida madaxa mas ee uu burburay by farcankaaga naagta waa Ciise Masiix). Aayadda 26 ee 1 Korintos 15 ayaa sheegay, "The dhimashada cadowga ugu danbeysay u diiday, awoodda oo dhan."